Press / Media - Expo momba ny varotra iraisam-pirenena Florida
Toerana, fanjakana, firenena
Tongasoa Tonga soa
Fikarohana sokajy vokatra
Torolàlana ho an'ny mpanatrika
Ivon-toeran'ny loka Expo
Inona ny Expo an'ny varotra iraisam-pirenena any Florida?
Tamin'ny volana Oktobra 2020, Enterprise Florida, Inc. (EFI) dia nanambara ny Florida International Trade Expo voalohany indrindra, fampisehoana virtoaly an'ny vokatra sy serivisy fanondranana any Florida. Florida no fanjakana amerikana voalohany nikarakara hetsika varotra virtoaly toy izany. Ny Florida Trade Expo dia hatao amin'ny 16-18 martsa 2021.
Ity sehatra an-tserasera an-tserasera ity dia hampifandray ireo orinasa kely sy salantsalany Florida miaraka amina mpihaino mpandraharaha manerantany an'ny orinasa vahiny liana amin'ny vokatra sy serivisin'izy ireo.
Raha nifindra tamin'ny seho varotra virtoaly ny fikambanam-pirenena sy ny varotra manerantany hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana, tsy nisy fanjakana amerikana nanao hetsika manokana nanasongadinana ireo orinasany madinidinika sy fananana indostrialy.
Nahasarika orinasa sy fikambanana 180 Florida ny Expo. Enterprise Florida dia mikendry mpanatrika 5,000 manerantany manerana ny tany mandritra ny hetsika mandritra ny telo andro. Ireo mpitsidika dia ahitana Agents, distributants, mpividy, solontena ary mpivarotra ambongadiny mitady vokatra avo lenta hozaraina sy amidy any Eropa, Amerika Latina ary Karaiba, Kanada, Mexico, Afrika, Azia ary Moyen Orient. Ny mpiara-miasa manohana ny hetsika dia misy ny US Commercial Service, ny birao iraisam-pirenena an'ny EFI ary ny fikambanam-barotra sy orinasa maro.
Ny Expo dia hampiasa ny haitao misy hevi-dahatsoratra misy lohahevitra farany, ao anatin'izany ny efitrano fampirantiana lehibe ahitana ireo mpampiranty Florida rehetra, mpandrindra virtoaly hangataka fihaonan'ny horonantsary amin'ireo mpampiranty; ivontoerana fanavaozana; efitrano fanaovana gazety; fahafaha-miasa amin'ny tambajotra, ary webinar-na informatika misy lohahevitra isa-maraina isa-maraina manomboka amin'ny 10:00 maraina ka hatramin'ny 11:30 maraina ET. Ny indostria dia ahitana fiaramanidina sy aerospace, siansa fiainana, teknolojia fampahalalana, serivisy ara-bola sy matihanina, orinasa mpamokatra, ary sehatra indostrialy manan-danja hafa manerana ny faritanin'i Florida.
Raha liana amin'ny fampirantiana ao amin'ny Florida International Trade Expo ianao, mifandraisa azafady floridaexpo@enterpriseflorida.com .
Iza Enterprise Florida, Inc.?
Enterprise Florida, Inc. (EFI) dia fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana sy ny mpitondra fanjakana Florida ary izy no fikambanana fampandrosoana fampandrosoana toekarena lehibe indrindra ho an'ny fanjakana amerikanina Florida. Ny iraka ataon'ny EFI dia ny hanitatra sy hampizarazara ny harinkarem-panjakana amin'ny alàlan'ny famoronana asa.
EFI no orinasam-panjakana voalohany amin'ny fampandrosoana varotra sy fanondranana entana, manohana orinasa maherin'ny 60,000 any Florida. Nandritra ny folo taona lasa, ny sandan'ny varotra varotra Florida dia nitombo avo roa heny, nahatratra $ 153.6 miliara tamin'ny taona 2019.
Ny orinasa Florida dia miasa ho toy ny mpamatsy lehibe ny mpividy any amin'ny firenena am-polony manerantany, mandefa entana vita any an-toerana any Florida, any an-kafa any Etazonia, na any amin'ny firenena hafa. Florida koa dia vavahady tena tsara ho an'ireo orinasa tsy amerikanina mivarotra ny entany amin'ny tsenan'i Etazonia midadasika.
EFI koa dia mitazona tamba-jotra misy ny birao iraisam-pirenena 18 izay miasa hampiroborobo ny fanondranana any Florida sy ny fampiasam-bola mivantana any Florida avy any amin'ny tsenan'izy ireo. Nahasarika ny toekareny lehibe sy miroborobo, tontolon'ny asa marin-toerana, ary ny mpiasa iraisampirenena, ny famatsiam-bola vaovao eran-tany dia miroboka any Florida isan-taona, ka mahatonga azy io ho iray amin'ireo toerana ambony any Etazonia ho an'ny FDI.
Ny orinasa iraisam-pirenena dia mampiasa Florida hiditra amin'ny tsena vao misondrotra any Amerika Latina sy Karaiba, ary koa ny tsenan'i Etazonia midadasika.
Inona ireo orinasa aseho amin'ny fampisehoana?
Hitohy mandritra ny volana vitsivitsy ny fandraisana mpiasa an-tsehatra ho an'ny fampisehoana fa handefa an lisitry ny orinasa nohavaozina izay nitahiry ny toerany.
Ireo orinasa avy amin'ireto sehatra manaraka ireto dia hampiseho:
Fiarovana sy fiarovana an-tanindrazana
Serivisy ara-bola sy matihanina
Siansa fiainana sy haitao fitsaboana
Fitaovana an-dranomasina sy sambo
Ireo mpanamboatra toa ny Entana ho an'ny mpanjifa, Fahasalamana sy hatsarana, Vokatra Sakafo, Fitaovana sy kojakoja indostrialy ary maro hafa
Ohatrinona ny vidin'ny orinasa Florida amin'ny fampirantiana?
Ny saram-pisoratana anarana dia $ 1,060 ary ny EFI dia manolotra vola fanampiana fampisehoana varotra virtoaly azo aloa ho an'ireo orinasa afaka misoratra anarana.
Ohatrinona ny vidin'ny mpitsidika amin'ny fampirantiana varotra?
Maimaimpoana ny fisoratana anarana ho an'ireo mpanatrika hetsika.
Afaka manatrika ny fampirantiana varotra ve ny gazety?
Eny, maimaimpoana amin'ny mpanao gazety ny fanatrehana ilay seho.
Azoko atao ve ny manomana dinika miaraka amin'ny Exhibitors sy / na ny mpiasa EFI?
Eny, hizara ny fandaharam-potoanan'ny mpampiranty sy ny mpiasan'ny EFI izahay izay ho vonona hiresaka amin'ny mpanao gazety mandritra ny herinandro mialoha ny seho.
Misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny Florida International Trade Expo
Florida dia mikarakara fampisehoana varotra iraisam-pirenena virtoaly voalohany
Enterprise Florida Manitatra ny fanampiana amin'ny fanaovana asa ara-barotra virtoaly hirotsahana amin'i Kanada sy Mexico
Enterprise Florida hanome loka ho an'ny fampisehoana varotra iraisam-pirenena virtoaly
Enterprise Florida manome loka ho an'ny fanaovana asa ara-barotra Virtual
Brian Mimbs | Tel: 1+ 850-294-0083 | Mailaka: media@enterpriseflorida.com
© 2021 Florida International Trade Expo. Namboarina maimaim-poana amin'ny fampiasana WordPress sy humming-vorona